Etu ị ga - esi họrọ sọftụwia maka akara aka ebe ị ga - ere (POS / POS) Site na Linux
Otee aka ka anyi jiri Linux ọ gwara anyị banyere Sọftụwia kachasị mma maka ebe a na-ere ere (POS / POS)N'ime ya, ọ nyere anyị ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwa ngwa ngwa ọzọ maka arụnyere na POS anyị. Na ohere a, anyị chọrọ inyere gị aka - họrọ sọftụwia dị mma maka ọnụahịa ire ere (POS / POS), Ha bụ obere ntuziaka na ndụmọdụ anyị kwesịrị iburu n'uche ka nhọrọ anyị kacha bụrụ nke dabara adaba.
1 Kedu ihe kpatara eji adị mma iji sọftụwia POS?
2 Kedu ihe anyị kwesịrị ime iji họrọ sọftụwia maka POS anyị?
2.1 Kọwaa mkpa azụmahịa gị.
2.2 Nyochaa ngwaike ị nwere.
2.3 Nyochaa arụmọrụ nke ngwanrọ ọ bụla.
2.4 Mee amụma na ego zoro ezo nke ngwanrọ ịhọrọ.
2.5 Nwalee ma nyochaa nkwado ngwanrọ.
Kedu ihe kpatara eji adị mma iji sọftụwia POS?
Enwere ọtụtụ ihe kpatara a Usoro ire ere, Ọ dị mkpa maka azụmaahịa azụmaahịa ma ọ bụ ire ere na ire ere. Ọ na - enyere ndị nwe aka aka ma jikwaa ngwa ahịa, azụmahịa, onyinye (dị ka ego, Kupọns, na ọpụrụiche) ma melite arụmọrụ ndị ọrụ, na-enye ha ohere itinyekwu oge isoro ndị ahịa na-emekọrịta ihe.
Na mgbakwunye, sistemụ ndị a na-enye akụkọ dị mkpa, dị ka nlekota arụmọrụ, jiri data ndị ahịa nyere aka mepụta azụmaahịa ndị ọzọ, kwe ka onye nwe ya nwee njikwa mgbe ọ na-anọghị, wdg.
Otu ire ere mejupụtara nke ihe di iche iche, tinyere ngwaike, sistemụ arụmọrụ, sọftụwia, wdg. Otu akụkụ dị mkpa bụ sọsọ ngwanrọ Point nke Sale.
Na ahịa e nwere ọtụtụ uzo ozo: Omenala Emepụtara, Azụmaahịa, Pụrụ Iche, Ebe a na-ere ahia na igwe ojii, wdg, ịhọrọ nke kachasị mma bụ ọrụ dị mgbagwoju anya ma dị mkpa, nke anyị nwere olileanya na anyị nwere ike inyere gị aka ime n'ụzọ kachasị mma.
Kedu ihe anyị kwesịrị ime iji họrọ sọftụwia maka POS anyị?
Ha dị ọtụtụ njirisi ndị anyị kwesịrị iburu n'uche mgbe anyị na-ahọrọ sọftụwia maka Ebe A na-ere Ahịa anyị, si na ego itinye ego, mkpa nke azụmahịa anyị, njedebe kọmputa, nkwado ngwanrọ, na ndị ọzọ.
Na ụzọ siri ike anyị na-ahụ usoro 5 nke anyị ga - ewere iji họrọ sọftụwia maka Ebe A na - ere Ọrịre anyị, mana a ga - agbakwunye na njirisi gị:
Kọwaa mkpa azụmahịa gị.
Businessdị azụmahịa ọ bụla nwere mkpa ọrụ dị iche iche, anyị ga-akọwa nke ọma, kedụ njirimara bụ isi nke sọftụwia chọrọ iji gboo mkpa anyị.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na enwere ngwanrọ maka Point of Sale Terminal e mere iji rụọ ọrụ n'ụdị azụmahịa dị iche iche, ya bụ, ngwanrọ maka ụlọ nri, ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, ụlọ akwụkwọ n'etiti ndị ọzọ, enwerekwa ndị ahaziri ịrụ ọrụ na onye ọ bụla, na-eji ọrụ nke ha bụ ọkọlọtọ na ụlọ ọrụ ọ bụla.
Mepụta ndepụta na mkpa azụmahịa gị ma jiri ya tụnyere sọftụwia dịnụ bụ ụzọ kachasị mfe iji mezuo usoro a.
Nyochaa ngwaike ị nwere.
Otu isi nsogbu ndị ọrụ nwere mgbe ha na-ahọrọ sọftụwia maka ire ere ha bụ na ha nwere ngwaike nke anaghị ekwe nkwa idozi arụmọrụ ziri ezi nke ngwa ọrụ ahụ. Iji mee nke a anyị ga-enyocha n'ụzọ ziri ezi njirimara nke akụrụngwa anyị, na-egosipụta: sistemụ arụmọrụ, processor, ebe nchekwa, ikike nchekwa, ọdụ ụgbọ mmiri, ngwa, njikọ na ohere nke ndozi.
Nyochaa arụmọrụ nke ngwanrọ ọ bụla.
Nzọụkwụ a metụtara gị mkpa gị, anyị ga-enyocha ọrụ ọ bụla nke sọftụwia anyị na-enyocha na-enye, ikike mmelite, mmelite, mmegharị na ụdị azụmaahịa gị, ịkelata, ojiji, na ndị ọzọ.
Ihe kachasị mkpa bụ ịhọrọ ngwanrọ nke nwere ọnụ ọgụgụ kachasị arụ ọrụ nke metụtara azụmahịa anyị yana ohere nke imeghari na uto ma ọ bụ ịmepụta ọrụ ọhụụ. Ọ bụ ezigbo ihe dị mkpa iji nyochaa nghọta nke koodu gị yana usoro ọ metụtara maka arụmọrụ ya.
Mee amụma na ego zoro ezo nke ngwanrọ ịhọrọ.
Otu n'ime mmejọ ndị kachasị anyị na-eme mgbe anyị na-ahọrọ ebe anyị na-ere ihe ngwanrọ bụ ihe dị mkpa anyị na-enye maka nyocha nke ụgwọ nchịkwa, mgbakwunye nke ngwanrọ a na-ekwu maka ya, njedebe nke ụfọdụ ụlọ ọrụ ngwanrọ na-etinye, n'etiti ndị ọzọ.
Ọ dị mkpa ịkọwapụta ajụjụ ndị a: Gịnị ka ọ na-enye? Kedu ihe ọ na-efu? Kedu ihe ọ chọrọ? Ego ole ka nkwado ahụ bara uru, Kedu n'efu na ihe a na-akwụ?
Nwalee ma nyochaa nkwado ngwanrọ.
Dị ka a ga - asị na ịhọrọ sọftụwia nwere ma ọ bụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, ị ga - eburu n’uche na nkwado ị nwere ike ị nweta site na ngwa ọrụ ahụ dị mkpa, ọ ga - abụ site na ndụmọdụ, enyemaka nke ngwanrọ, ma ọ bụ obodo ndị gbara ya gburugburu.
Ihe dị mma bụ na ị nyochaa akwụkwọ ya, usoro ị ga - agbaso ma ọ bụrụ na i mehiere, akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ, nkwado ahaziri iche, ọgbakọ na blọọgụ, gụọ nkọwa gbasara ngwanrọ ma soro ndị mmepe ma ọ bụ ndị nnọchianya ngwaọrụ.
Anyị nwere ike ịhọrọ sọftụwia zuru oke, mana ọ bụrụ na enweghị ụzọ isi mụta ya, iji dozie mmejọ ya ma ọ bụ naanị ịgbakwunye arụmọrụ ọhụrụ, itinye ego na mbọ enweghị uru ọ bụla.
IkwubiAnyị ga ekwusi ike na anyị ga-elerịrị sọftụwia maka POS anya dị ka ngwaọrụ ga-eme ka anyị nwekwuo ahịa ma belata ọnwụ anyị. Dabere na nke a, anyị ga-enye ha mkpa ha kwesịrị, ndị ọzọ dị, iji nke kachasị dabara maka azụmaahịa gị bụ ọrụ gị.
Onwe m, enweela m ezigbo ahụmịhe n'iji ọdụ ụgbọ Ugboro y OpenBravo NKA, na nke mbụ ọ bara uru ịkọba, nke bụ a 100% igwe ojii igwe ojii, na iji nnukwu arụ ọrụ, na mgbakwunye na arụmọrụ dị mma na nke abụọ nke na-emezue ọkacha mmasị m ERP Mma.
Anyị chọrọ ịma ihe ị chere gbasara ndụmọdụ ndị a ma gụọkwa nke gị. Echefula ịhapụ ihe gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Etu ị ga - esi họrọ sọftụwia maka akara ire ere gị (POS / POS)
N'ime ụlọ ọrụ anyị na-arụ ọrụ (Productoe, anyị pere mpe) anyị na-eji Odoo dịka ngwugwu njikwa, gụnyere pos. Mbipụta ahụ dị ezigbo mma, ọ na-agba na ihe nchọgharị weebụ ọ bụla (anyị na-eji Chrome) yabụ ihe igwe ọ bụla nwere ike ịgba ya, dịkwa ka ngwugwu ọfịs anyị jiri nke Google, yana na weebụ, yana otu ihe ahụ na Odoo.
Ihe ngwaike bụ nke abụọ maka anyị, yana euro 250 ị nwere ụlọ elu zuru oke ị ga-apụ na webụ, maka nchekwa 120GB SSD ma ọ na-aga nnukwu, ọsọ ọsọ (data dị na weebụ ma anyị anaghị ewe diski). Site na ọnụahịa ndị a ekwesighi ka ihe dị mgbagwoju anya na igwe ochie, belụsọ maka mkpa dị ukwuu. Maka nyocha ahụ ọ na-anabata mmetụ ahụ, ọ dị ezigbo mma maka POS (ọnụahịa iche).
Maka os ị nwere ike icheworị na anyị na-eji GNULinux, yabụ enweghị antivirus ma ọ bụ ballasts ndị ọzọ.
N'ihe banyere POS anyị anaghị eji igbe ndị ahụ akpọkọtara maka ha, yabụ echeghị m, ọ bụ ezie na echere m na ọ bụrụ na ha dị mkpa na ha ga-adaba maka GNULinux (ụfọdụ ọbụlagodi).
Nanị nsogbu anyị nwere bụ na akụkụ, ị ga-akpachara anya na ndị na-ede akwụkwọ, ibu, wdg. dakọtara, ịnweghị ike ịzụta obere ma ọ bụ na ha ga-emerụ gị ahụ.
Mmechi, ma ọ bụrụ na ị na-emegharị ka ọkọlọtọ ị nwere ike ịnweta ezigbo mma maka ụgwọ dị ntakịrị. Anyị enweworị ngwanrọ ndị ọzọ maka Windows, ọ bụghị ọnụ ala ma ọ bụghị n'ihi na a kwụrụ ya ka mma ma ọ bụ karịa karịa, enwere ekele maka mgbanwe ahụ. N'ụzọ ezi uche dị na ya, anyị niile abụghị ndị mmemme, anyị ga-akwụ ụgwọ mmezi, ya bụ, onye na-etinye ihe nkesa na weebụ, wepụta akwụkwọ nkwado, wdg, wdg. mana ihe dị mkpa bụ ịchekwa na ikikere, ma maka mmemme, OS, ụlọ ọrụ, antivirus, wdg. na ihe na enye anyi otutu oke na mmefu ego. Ya mere, ọ naghị ewute anyị nke ukwuu ịgbanwe mpaghara na-ekwekọghị ekwekọ ma ọ bụ ịnwe mgbanwe maka ịhazigharị mmemme ahụ maka mkpa anyị.
Ihe nwute na, n'ozuzu n'ihi amaghị ihe, ụlọ ọrụ anaghị etinye uche na azịza n'efu, ha na-enye nsogbu ole na ole ma na-anọchite anya nchekwa dị ukwuu maka oge ndị na-agba ọsọ.
Ezigbo okwu m hụrụ n'anya, amaara m Odoo na oke ya, ọ bụ ezie na etinyewo m oge karịa na-arụ ọrụ na COMPIERE, Adempiere na Idempiere, nke dịka Odoo na-eji otu akwụkwọ ọkọwa okwu data.
O doro anya na ahụmịhe gị bụ ihe anyị chọrọ ịgụ n'oge niile, ụlọ ọrụ ndị a gbara ume iji sọftụwia na-akwụghị ụgwọ yana na-ekwe ka ha mepụta ihe owuwu yana ụkpụrụ na-enye ohere ịnabata ngwaọrụ n'ọnọdụ ọ bụla.
Free Software, karịa ịchekwa na ikikere, bụ ohere ịmara ihe ngwanrọ gị na-eme n'ezie, iji nwee ike ịmegharị ngwanrọ na mkpa gị, ịgbakwunye ma melite ngwanrọ ahụ na karịa ihe niile iji kwụọ ụgwọ mmezi ndị ahụ na-enweghị njedebe.
Enwere m olileanya na otu ụbọchị gụọ ahụmịhe gị n'ụzọ zuru ezu karị ma gbanwee ihe ọmụma ị nwetara na ọkwa azụmahịa.
Ndewo, onye ọ bụla maara maka POS maka obere azụmahịa, nke ahụ adịghị agafe agafe na ị gaghị agagharị gburugburu ihe na ihe ọnụ ka o wee rụọ ọrụ?
Ma ọ bụ onye mepụtara ihe na-arụ ọrụ na-achọ mkparịta ụka maka ọnụ ahịa ziri ezi?
emeghe bravo, unicenta, lemon pos abụghị nhọrọ.
Onye Kraist dijo
M sonyeere ọgbakọ ahụ wee jụọ ihe kpatara "emeghe bravo, unicenta, lemon pos abụghị nhọrọ"
Oscar Quezada dijo
Morningtụtụ ọma! Anọ m na-enyocha enwere m mmasị na teknụzụ igwe ojii mana achọtaghị m karịa:
https://wallypos.com/ ma m n'ezie na-amasị ya interface.
https://www.smarttouchpos.com.pe/ Ahuru m na obu ohuru, ka odi onye obula nwale ya n’ihi na m huru na o zuru ezu? Helpfọdụ na-enyere aka ma ọ bụrụ na mmadụ ejirila nke ọ bụla nwee ike ịhọrọ usoro kachasị mma n'ahịa.
Zaghachi Oscar Quezada
Ihe ndị ọzọ m ga-agbakwunye iburu n’uche bụ: ogologo oge ole ụlọ ọrụ ndị na-emepụta sọftụwia na-adị n’ahịa? Olee otu o si kwụsie ike? Ugboro ole ka mmelite na-apụta? wdg.
Etu esi lelee nsonaazụ Cricket sitere na Dashboard